कस्ता पुरुष चाहन्छन् त युवती ? - inaruwaonline.com
कस्ता पुरुष चाहन्छन् त युवती ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ०४, २०७३ समय: १४:०८:०२
महिलाको सुन्दरता देखेर पुरुष आकर्षित हुन समान्य कुरा हो । तर युवती कस्ता पुरुष चाहन्छन् त ? यदी आफुले चाहे झै पुरुष पाएको खण्डमा युवती खुसी हुने छन् र जीवन सुखमयी ढंगमा चल्ने छ । आखिर के चाहन्छन् त युवतीले पुरुषबाट ?
स्वभाव : कुनै पनि सम्वन्धको सुरुवात सामान्यतया बाहिरी आकर्षण हेरेर नै स्थापित हुने गरेको छ । सम्वन्ध स्थापित भएसँगै त्यसलाई सुमधुर बनाउनको लागि पुरुषको स्वभावले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । पुरुषको दृण खालको स्वभाव युवतीलाई बढी आकर्षण गर्ने गर्दछ ।
लुक्स तथा आकर्षण : महिलाले आफ्नो जीवन साथी राम्रो वा राम्रो व्यक्तित्व भएको इच्छा वढी नै राख्ने गर्दछन् । पुरुषको छालाको रंगले पनि संम्वन्ध स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ ।
मुस्कान : राम्रो लुगा र पर्सनालिटि सँगै युवती आकर्षण गर्ने अर्को माध्यम हासो पनि हो । एक प्यारो मुस्कान तथा इमान्दार हासोले धेरै महिला लठ्ठ पर्नुका सार्थ त्यस्ता पुरुष सँग नजिकिन चाहान्छन् ।
हासोमजाक स्वभाव : यदी तपाई युवतीको भाषामा विन्दास हुनुहुन्छ भने पनि तपाई महिलाको नजरमा पर्न सक्नु हुन्छ । हासो मजाक गर्ने खालको स्वभाव भएका पुरुष प्रति बढी युवती आकर्षित हुन सक्छन् ।
शारीरिक ढांचा : पुरुषको शारीरिक ढाचाले युवतीलाई बिषेश प्रभाव पार्ने गरेको छ । सानो पातलो लाई भन्दा पुष्ठ शारीरिक बनावट भएको स्टाइलिष्ट, हाइट भएको व्यक्तिलाई युवतीहरुले मनपराउने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपलसन्देश डटकम बाट ।